An'arivony maro no tafaporitsaka satria nanafoana sidina an-jatony maro ny Southwest tamin'ny alatsinainy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » An'arivony maro no tafaporitsaka satria nanafoana sidina an-jatony maro ny Southwest tamin'ny alatsinainy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Southwest, fantatra amin'ny vidiny somary ambany ihany, dia nanafoana sidina farafahakeliny 1,018 ny alahady, izay ankoatry ny sidina 808 izay nofoanana tamin'ny sabotsy, raha ny angom-pahalalana momba ny sidina.
Southwest Airlines dia manafoana sidina an-jatony maro amin'ny Alatsinainy maraina taorian'ny fanafoanana ny faran'ny herinandro 2000.
Mpandeha any Andrefana an'arivony no tavela teo amina seranam-piaramanidina manodidina ny firenena.
Southwest Airlines no nanome tsiny ny taha tsy mahazatra amin'ny fanafoanana amin'ny resaka fifehezana ny fifamoivoizana.
Nitohy androany ny faharatsian'ny Southwest Airlines tamin'ny faran'ny herinandro, ary nofoanana ny sidina 350 mahery ny mpitatitra ny alatsinainy maraina.
Nanomboka ny zoma ny olan'ny Southwest Airlines raha ny toetr'andro mahery tany Florida sy ny olan'ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an-habakabaka dia niteraka fanafoanana marobe, namela ny mpanjifa sy ny ekipa ekipa tsy ho eo amin'ny toerany.
An'arivony Southwest Airlines'Mpandeha' tavela tavela any amin'ny seranam-piaramanidina.
Tamin'ny fanambarana ny faran'ny herinandro, Southwest Airlines dia nanome tsiny ny taha tsy mahazatra amin'ny fanafoanana ny olana amin'ny fifehezana ny fifamoivoizana an-habakabaka sy ny "toetr'andro manakorontana," ary nanampy izy ireo fa miasa mba "hamerenana" ny hetsika.
Ny fikambanan'ny mpanamory fiaramanidina Southwest Airlines (SWAPA), izay maneho ny mpanamory fiaramanidina 10,000 XNUMX eo ho eo, dia nandatsaka rano mangatsiaka tamin'ny fanombantombanana fitokonana mitohy, tamin'ny Alahady fa ny vondrona dia "nifantoka tamin'ny fiarovana ny ekipanay, ny mpandeha ary ny fandresena ireo fanamby amin'ny asa fa tsy asa tsy ofisialy fihetsika. ”
Na izany aza, ny fampahalalam-baovao mitanisa ny "loharanom-piaramanidina" dia nitatitra fa ny mpanara-maso ny fifamoivoizana dia nanao "marary" na fitsangantsanganana an-tsokosoko tao amin'ny foibe fibaikoana ny fifamoivoizana an'habakabaka tany Hilliard, Florida momba ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao. Ny fihetsiketsehana notaterina dia niteraka fikorontanana "vokan'ny ripple" Southwest Airlines'opérations.
Mamaly ny tsaho momba ny fitsangantsanganana an-tongotra ny alahady tolakandro, ny Fitondrana federaly federaly (FAA) Nolavina ny tatitra ary nanitrikitrika fa "tsy nisy tsy fahampian'ny mpiasa mpiasan'ny rivotra FAA hatramin'ny zoma."
Ny Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Jacksonville Aviation Authority Tony Cugno dia voalaza fa nandefa mailaka tany amin'ny filankevi-pitantanan'ny JAA, nahatonga ny fiampangana noho ny fanimbana nataon'ny mpiasa sasany naka ny "ravin'izy ireo nankatoavina ara-dalàna" ary ny mpanera tsy maintsy mijanona ao an-trano mandritra ny 48 ora taorian'ny nahazoany COVID- Vaksiny 19 no voatifitra.
SouthWest Airlines no lasa iray amin'ireo mpitatitra fiaramanidina amerikana lehibe farany nampiditra mandat ny vaksininy ho an'ny mpiasan'izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Mpiasa 56,000 any Southwest eo ho eo no manana vaksiny raha toa ka te hitazona ny asany izy ireo.